Shirkadda diyaaradaha ee Alitalia oo soo gebagebeysay Duullimaadyadii 75 Sano kadib Hawada ka baxday | Dayniile.com
Home Warkii Shirkadda diyaaradaha ee Alitalia oo soo gebagebeysay Duullimaadyadii 75 Sano kadib Hawada...
Shirkadda diyaaradaha ee Alitalia oo soo gebagebeysay Duullimaadyadii 75 Sano kadib Hawada ka baxday
Shirkadda diyaaradaha ee Alitalia waxay xalay soo gebagebeysay Duullimaadyadii, iyadoo Socdaalkii u dambeeyey xalay ku sii khatintay Duullimaad ay isaga kala gooshtay magaallooyinka Cagliari iyo Rome.
Shirkadda oo ku-dhawaad 75 sano shaqaynaysay waxaa tan iyo sanadkii 2008-dii ku soo jirtay Xaallad Khasaaro leh, waxaana la soo gudboonaatay Musuq, Dhaqaale-Xumo iyo Miisaaniyad La’aan ay ugu dambeyntii la turunturootay, oo ay Hawada kaga baxday.
Shirkadda Alitalia waxaa si rasmi ah Maanta ula wareegtay Shirkadda Cusub ee ITA oo u taagan Italia Transporto Aereo.
Magaca Astaanta Xuquuqda ee Alitalia waxaa la sheegay inuusan weli dhiman, inkastoo Shirkadda cusub ee ITA iibsatay saamigii Shirkadda Alitalia iyo dhamaan Diyaaradihii Shirkadda Alitalia oo ay Dowladda Talyaaniga lahayd.
Shirkadda cusub ee ITA waxay sheegtay inay la wareegtay 2,800 oo Shaqaale oo ka mid ahaa 10,000 oo Shaqaale u diiwaan gashanaa shirkaddii Alitalia.
Bishan October 1-dii, Shaqaalaha Shirkadooda Diyaaradaha ee Alitalia waxay dhigeen Dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan Iibinta Shirkadda Alitalia iyo shaqo la’aanta soo wajahday inta badan Shaqaalaha Shirkadaasi.
W/Q Ustaad Nuuradiin
Previous article Daily-Mail oo qoray in dilka loo geestay Xildhibaan David Amess uu ka dambeeyay 25-sano jir Soomaali ah.
Next articleShir laga yeeshay Amni darrada kusoo batay degmada Marka
Jeneraal Tuuryare oo ka deyriyey Doorashada Xildhibanada Galmudug
#HOP67 waxaan xalay ka soo noqday safar shaqo oo 3 cesho aan ku joogay Galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb,waxaan usoo noqday:- 1. in aan warbixin kasiiyo...
Garsoorihii Dumiyey Xukuumaddii Dalkiisa!!
Weerar qasaare gaystay oo ka dhacay gobalka Kashmiir ee dalka Hindiya